RASMI: Tottenham Oo Laga Caydhiyey Tartanka Europa Conference League - Laacib
HomeWararka Champions LeagueRASMI: Tottenham Oo Laga Caydhiyey Tartanka Europa Conference League
RASMI: Tottenham Oo Laga Caydhiyey Tartanka Europa Conference League
December 20, 2021 Abdiwahab Ahmed
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa ka caydhiyey tartanka Europa Conference League kooxda Tottenham, kaddib markii ay baaqatay kulankii ay la ciyaari lahayd Rennes sabab la xidhiidha Fayraska Koorna.
Tottenham ayaa dalbatay in dib loogu dhigo kulan ay la ciyaari lahayd Rennes markii ay taariikhdu ahayd December 9, taas oo ay FIFA ka aqbashay maadaama dersin ciyaartooyo ah ay kaga maqnaayeen Fayraska Korona oo xilligaas ka dhex dillaacay Spurs.
Go’aankaas ayaa waxa ka cadhootay Rennes maadaama xilliga ciyaarta la baajiyey ay ku sugnaayeen magaalada London oo ay hal habeen joogeen, taas oo abuurtay muran dhinaca UEFA gudaheedxa ah.
Tottenham oo kaalinta saddexaad kaga jirtay Group-keeda, ayaa haddii ay guuleysato ciyaartaas, waxay usoo bixi lahayd wareegga xiga ee isku-aadkiisala sameeyey bishan gudaheeda, balse UEFA ayaa mar dambe go’aamisay in guddi loo saaro arrintan, taas oo iyaduna ku talisay in Spurs laga caydhiyo tartanka.
Rennes ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxday hormadan, halka Vitesse ay iyaduna labaad kusoo boodday, sidaasna ay ku hadhay Tottenham.
Guddida ay UEFA u saartay Tottenham ayaa waxay daliil ka dhigatay qodobka Annex J.3.1 ee sharciga ciyaaraha Yurub, waxaanay sidaas guul 3-0 ah ku siiyeen Rennes, iyadoo Tottenham lagu qoray sidii ay awoodi weyday ama diidday inay ciyaarto kulankan.
Arrintan ayaa niyad-jab weyn ku ah Tottenham, waxaana meesha ka baxday filashadii uu Antonio Conte qabay ee ahayd inuu ku guuleysto tartankan maadaama ay kooxdiisu ahayd naadiga ugu awoodda badan ee ka qayb-gelayay tartankan.